प्रधानमन्त्री देउवा बीजेपी मुख्यालयमा किन गए ? – Karnalikhabar
प्रधानमन्त्री देउवा बीजेपी मुख्यालयमा किन गए ?
काठमाडौं/ नयाँ दिल्ली : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतको तीन दिने भ्रमणलाई राजनीतिक, कूटनीतिक र धार्मिक रूपमा उपयोग गरेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच सीमासम्बन्धी विषयमा राम्रो छलफल भएको जानकारी दिए। दुई देशबीच स्थापित संयन्त्रहरूमार्फत सीमासम्बन्धी विषयहरू संवाद र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने कुरामा स्पष्ट भएको मन्त्री डा. खड्काले बताए।
भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले दुई देशबीच संवादको ढोका खोलेको बताए। दुई देशबीच सीमालगायत सबै मुद्दामा गहन छलफल गर्न भारत सकारात्मक भएको शर्माको भनाइ छ। ‘अब थाती रहेका विषयहरू छिटोछिटो अगाडि बढ्छन्। त्यसमा मेरो पहल रहन्छ’, राजदूत डा. शर्माले भने।
मन्त्री डा. खड्काले नेपाल–भारत सम्बन्धका बहुआयामिक क्षेत्रमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै ऐतिहासिक भ्रमण भएको दाबीसमेत गरे। ‘दुई देशबीचको सहयोगार्थ सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने फलदायी छलफल भयो’,
डा. खड्काले भने, ‘स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापार तथा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, सीमापार कनेक्टीभिटीका लागि रेल सेवा सञ्चालन कार्य अगाडि बढाउने, पुल निर्माण तथा एकीकृत आन्तरिक, द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने साथै रासायनिक मल उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भयो।’
नेपालको विकासमा भारतको सधैं साथ र सहयोग रहने आश्वासन मोदीले दिएको डा. खड्काले बताए। ‘भैरहवा र पोखरामा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा सहज उडान सञ्चालनका लागि एवं नेपालमा हवाई ट्राफिकलाई मध्यनजर गर्दै नेपाललाई महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज र जयपुरबाट थप उडान गराउने विषयमा छलफल भएको छ’, उनले भने। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि अविलम्ब इयर बोर्डर अपरेसन सहमतिका लागि भारतसमक्ष प्रधानमन्त्री देउवाले अनुरोध गरेको मन्त्री डा. खड्काले बताए।
बीजेपी मुख्यालयमा किन ?
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)को मुख्यालय पुग्नुको रहस्य के हो भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा मन्त्री खड्काले भने, ‘प्रधानमन्त्री देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापतिको हैसियतले बिजेपी मुख्यालयमा जानुभएको हो। विभिन्न देशका पार्टीहरूसँग पनि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्दै आएको छ। चीनको कम्युनिष्ट पार्टीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ। पार्टी टु पार्टी सम्बन्ध बिस्तार गर्नका लागि उहाँ जानुभएको हो।’
देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भएको आठ महिनापछि औपचारिक भ्रमणमा शुक्रबार नयाँ दिल्ली ओर्लिएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रमणको सुरुवात राजनीतिक भेटवार्ताबाट गरेका थिए। देउवा कांग्रेस सभापतिका हैसियतमा दीनदयाल उपाध्याय मार्गस्थित भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयमा पुगे। देउवालाई भाजपा राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड्डा र विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले स्वागत गरेका थिए। पार्टी टु पार्टी सम्बन्ध मजबुत बनाउन अनुभव आदानप्रदान, युवा र महिला डेलिगेट्स आदानप्रदानबारे समझदारी भएको थियो।
बारखम्बा रोडस्थित नेपाली राजदूतावासमा देउवाले कांग्रेस आईका वरिष्ठ नेता करण सिंह, जनता दलका नेता एवं राज्यसभाका पूर्वसांसद केसी त्यागी, भाजपा नेता विजय जोलीसँग भेट गरेका थिए। त्यसपछि देउवाले कूटनीतिक भेटवार्ता थालेका थिए। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग शिष्टाचार भेट गरेका देउवाले भोलिपल्ट शनिबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग शिष्टाचार भेट तथा द्विपक्षीय वार्ता गरे।
जनकपुर–जयनगर रेल, सोलु करिडोर र रुपे कार्ड उद्घाटन, स्वास्थ्यचौकी हस्तान्तरणका साथै चारवटा सम्झौता गरे। कूटनीतिक रूपमा सीमा समस्या, हवाई रुट, भन्सार, जलविद्युत्लगायत विषय उठाए। मोदीले पनि नेपालको सदियौं पुरानो बहुआयामिक सम्बन्धको चर्चा गरे।
देउवाले शनिबार साँझ भारतीय उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गर्दै नेपालमा लगानी गरी समृद्धिको अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरे। देउवाले आफ्नो भ्रमणलाई धार्मिक रूपमा पनि उपयोग गरे। देउवाले आइतबार उत्तर प्रदेशको धार्मिक सहर बनारसमा पूरा दिन बिताए।
पत्नी आरजुसहित १५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल लिएर एयर इन्डियाको विमानबाट आएका देउवालाई लालबहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले स्वागत गरेका थिए।
योगीसँगै देउवाले पत्नी र आफ्ना मन्त्रीहरूसहित काशी विश्वनाथ मन्दिरमा दर्शन तथा पूजापाठ गरे। कालभैरव मन्दिरमा प्रार्थना गरे। देउवाले वाराणसीस्थित ललिताघाट, पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा नेपालको लगानीमा बन्न लागेको वृद्धाश्रमको भूमिपूजनसहित शिलान्यास पनि गरे।
देउवाको भाजपा मुख्यालयदेखि बनारससम्म यात्राको धार्मिक सन्देश रहेको जानकारहरू बताउँछन्। हिन्दुत्वलाई महत्व दिने भाजपा र हिन्दु धर्मका प्रवर्धक योगी आदित्यनाथको आतिथ्य ग्रहण तथा भलाकुसारी धार्मिक कोणले महत्वपूर्ण छ। केही जानकार सभापतिको हैसियतमा देउवाले कांग्रेस हिदुत्वप्रति प्रतिबद्ध रहेको देखाउन खोजेको बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीको भाजपा मुख्यालय भ्रमणलाई विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवा दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध विस्तारका रूपमा अथ्र्याउँछन्। हिन्दू राष्ट्र नेपालको आन्तरिक मामिला भएको उल्लेख गर्दै उनले भाजपाले विश्वका सबै पार्टीसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको र यही सिलसिलामा नेपाली कांग्रेससँग सम्बन्ध स्थापित भएको प्रष्टीकरण दिए। दुई पार्टीबीच विभिन्न तहमा आदानप्रदान बढाउने र दुई बीचको सम्बन्धमा रहेका समस्या अन्य तहबाट समाधान नभए राजनीतिक रूपमा गर्न यो सम्बन्ध सघाउने उनको भनाइ छ।
अघिल्लो - जनकपुरधाम : मेयरलाई शौचालयमा एसी, शहरको फोहोर ज्यूँका त्यूँ !
राष्ट्रपति भण्डारीले काष्ठमण्डपको उद्घाटन गर्ने - पछिल्लो